A Imozulu yeMeditere, sezibonelelo zothutho robust, amathuba amahle ukuba bahambe, kwakunye nemisebenzi eyahlukeneyo nabanye nokuba nexesha lokuphola, ukwenza Spain phantse kwilizwe iphupha. Elise zantsi Europe, ngokuqinisekileyo Spain ayincedi enye kakhulu uhambo ngololiwe intle eYurophu. Speyin uqikelelo lwemozulu ngokutshisa, ehlobo nowobulali, ebusika zemvula. Ekubeni Spain lelinye lamazwe ezinkulu European, has lwemozulu ngaphezu kwesinye. ke, ungalindela imozulu enefuthe kwilizwekazi kwithafa eliphakathi eliphakathi: ulungele hot, ehlobo kunye ebusika obubandayo. translation: ukuba wena akunguye eya Spain uze ucwangcise ekuhlaleni iinyanga ezimbalwa, yiza nesuti yokuqubha kunye nebhatyi.
Photshugo – I-1 kumazwe aseYurophu aneMozulu elungileyo
ulinganiso lweenkcukacha – Okubi kakhulu kuluhlu lwaMazwe aseYurophu kunye neMozulu elungileyo
Nangona zobugcisa ngokuphelele langa, ngokwembali, Ngokwenkcubeko, ulinganiso lweenkcukacha ayikho enye Europe Countries kunye Weather Best. Well, ngaphandle uyayonwabela inkungu njalo, imvula, amafu kunye grey kakhulu ukuba umlibale into eminye imibala ezikhangeleka. Umoya emanzi Ukungaqiniseki kwalo okupheleleyo musa akuncedi nganto. Nangona eBritani unayo ezi- enelanga apha naphaya, sicebisa ukuba ukuba (nanini!) uphume ngaphandle iambrela kunye spare T-shirt. Jonga le 4 umdla train ezimqoka pre-uhambo eYurophu phambi kokuba uye kwi uhambo lwakho.
Kusenokwenzeka ukuba elinye lamazwe kakhulu mihle aseYurophu, I-Iceland iyazingca ngemilambo yayo emnandi, engaphele ndawo landscapes oluhlaza, kwiincam zeentaba njengekhephu-ezimhlophe, kunye neengxangxasi nezisemaphandleni. Oh, masenze ukulibala ezihambayo yayo enkulu, imithombo eshushu kunye ngogesi, kwaye ezinye friendliest, abantu emhlabeni! kunjalo, ngebhadi, eli lizwe yaseScandinavia ke babedume ukuba imozulu ayiqinisekanga libi. Iceland kuye malunga 320 imihla amafu ezingwevu, 215 imihla imvula, kwekhephu, kunye blizzards. Asiyondawo abafuna ukuba sibe vacay sunny.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-countries-best-weather%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#umqeqeshi #ubushushu #Grisi #kushushu #ishushu #Ayisilend #iunited Kingdom #sezulu ukhenketho indawo yokuhamba